MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA TARANKA NOOLAHA EE 'SPRINGER SPANIEL DOG' - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada Taranka Noolaha ee 'Springer Spaniel Dog'
Becham Ingiriisi Gu'ga Isbaanishka ah ee 10 bilood jira
ing-glish guga-er span-yuh l
Ingiriisiga Springer Spaniel waa eey dhexdhexaad ah oo is haysta. Madaxa ayaa la jaanqaadi kara jirka. Qalfoofka ballaaran waa dherer dhexdhexaad ah oo fidsan dusha sare. Dhererka madaxu wuxuu la eg yahay dhererka qoorta. Afku wuxuu u egyahay dhererka dhakada, oo leh joogsi dhexdhexaad ah. Sanku waa beer ama waa madow, waxay kuxirantahay midabka jaakada eyga. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha dhexdhexaadka ah, ee u eg oval-ka ama hazel mugdi ah oo ku taal beerka iyo eeyaha cad ama midabka madow ee madow eeyaha iyo caddaanka ah. Dhegaha, dhaadheer, balaaran, dhegta u laalaada waxay laalaadaan dhabannada waxayna gaadhaan sanka markii hore loo soo jiido. Laabta ayaa qoto dheer. Dhabarka ayaa la siman dhererka, qiyaastii wuxuu la mid yahay dhererka eeyga ee dhulka ilaa qallajinta. Lugaha hore waa toosan yihiin, cagguna waa is haysta. Dabada ayaa badiyaa la soo xidhaa. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Koodhku waa dherer dhexdhexaad ah oo leh baalal lugaha, dhegaha, dhabannada iyo garabka. Midabka jaakadu wuxuu ku yimaadaa beerka iyo caddaanka, iyo madow iyo caddaan, inta badan caddaan leh calaamado madow ama beer, buluug ama roan beerka, qaab saddex-geesood ah oo madow iyo caddaan ah ama beerka iyo caddaan leh calaamado tan ah, oo badanaa laga helo sunnayaasha, dhabannada, gudaha dhegaha iyo dabada hoosteeda. Meelaha cad ee jaakaddu waxay yeelan karaan shil
Xilliga Jiilaalka Ingiriisiga ah waa kuwo xitaa dabacsan, dabacsan, saaxiibtinimo leh, oo eey dad wadaaga ah oo carruurta wehel u ah la sameeya. Caqli leh, karti badan, diyaarna u ah oo adeeca oo bartaha dhaqsaha leh. Geesinimo, ciyaar, firfircoonaan, rayn rayn iyo rayn rayn leh, dabadooda ayaa had iyo jeer umuuqda kuwo dhaqdhaqaaq leh. Waxay yihiin kalgacal, dabeecad wanaagsan oo daacad ah eeygan wuu jecel yahay qof walba. Xilliga gu'gu wuxuu si fiican u shaqeeyaa markay la joogaan dadka siin kara nooc ka mid ah qaabdhismeed joogto ah meesha xeerarka ayaa lagu caddeeyay . Arrimo taban ayaa ka dhalan kara milkiilayaasha khafiifka ah iyo / ama milkiileyaasha aan bixin jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah . Tani waxay ku abuuri kartaa jahwareer eeyga waxayna noqon karaan wax duminaya oo aad bilowdo inaad waxbadan ciyo haddii keligaa laga tegey . Haddii Springer uusan u arkin milkiileyaasha inay yihiin shaqsiyaad awood adag leh waxay bilaabi doonaan inay aaminaan inay tahay shaqadooda inay la wareegaan doorka hogaaminta. Haddii aad u oggolaato inay taasi dhacdo eygu wuxuu noqon karaa mid xoogaa isku dayaya inuu dadka ku hayo safka. Jiilaalleyda qaangaarka ah waxay u baahan yihiin hagitaan badan oo awood leh. Waxay u nugul yihiin codka qofka mana dhageysan doono haddii ay dareemaan inay ka maskax adag yihiin milkiilahooda, hase yeeshee sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonaan anshaxa adag. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay is dejiyaan, hase yeeshee leeyihiin hawo awood dabiici ah. Da'daan waxay noqon karaan tamar saaid ah, tijaabinta iyo loolanka jagada hogaaminta. Waxaa jira laba nooc, khadadka xariiqda iyo khadadka bandhigga (keydka). Noocyada aagagga waxaa loogu talagalay ugaarsiga iyo shaqada tijaabada goobta. Nooca kursiga keydka ayaa loo kariyaa muujinta qaabeynta wuxuuna leeyahay jaakad ama beer ka badan madow jaakaddiisa, jaakadahana way ka dheereeyaan oo ka sii buuxsamaan. Nooca berrinka ayaa ka cadcad jaakaddiisa marka loo eego nooca bandhigga iyo timo aad u yar. Labada noocba waa kuwo caqli badan oo firfircoon waxayna u baahan yihiin jimicsi maalinle ah, laakiin khadadka aagagga waxay leeyihiin heer tamar sare waxayna u baahan yihiin xitaa jimicsi dheeri ah. Heerka xukunka ee noocani wuxuu ku kala duwan yahay xitaa isla qashinka. Haddii aadan ahayn nooca qofka soo bandhigi kara hawo dabiici ah oo xasilloon, laakiin awood adag, markaa hubi inaad doorato cunugga u hoggaansan. Dabeecada muuqaalka iyo khadadka duurka labaduba aad ayey u kala duwan yihiin, waxayna kuxirantahay sida milkiilayaashu ula dhaqmaan eeyga iyo inta iyo waxa nooca jimicsiga waxay bixiyaan. Waxay jecel yihiin biyaha waxaana laga yaabaa inay si joogto ah isu qoyaan oo dhiiqo u noqoto. Badanaa way ku fiican yihiin xayawaanka kale laakiin maadaama ay yihiin ugaarsade shimbireed dabiici ah yaan lagu aaminin shimbiraha . Waxay mararka qaar muran ku noqon karaan eeyaha kale haddii milkiilayaashu aysan si cad ula hadlin cidda masuulka ka ah.
Dhererka: Ragga 19 - 21 inji (48 - 56 cm) Dumarka 18 - 20 inji (46 - 51 cm)
Miisaanka: Ragga 45 - 55 rodol (20 - 25 kg) Dumarka 40 - 50 rodol (18 - 23 kg)
Qaar ka mid ah Jiilaalleyda Ingiriisiga ayaa u nugul cudurka dysplasia, PRA, oo saameeya indhaha, PFK, cillad dhiig, qalal, iyo HD. Waxay ku guuleystaan ​​culeyska si fudud looma weynaado.
Waxay ku fiicnaan doonaan aqalka dhexdiisa haddii jimicsi ku filan ay sameeyaan. Ingiriis Springer Spaniels waxay si fiican ula qabsadaan nolosha magaalada ama magaalada. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawlgalaan waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Jiilaalku waxay ku raaxaystaan ​​jimicsi inta aad siin karto ah. Waxay ubaahanyihiin inbadan si ay ugu farxaan. Waa inay helaan fursado ay ku qaataan maalin kasta socod dheer ama ku ordayaa meesha eeyga looga sameeyo ciribta qofka dhinac ama gadaashiisa, marna hore, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa, hogaamiyaha ayaa ku hogaaminaya wadada. Waxay sidoo kale ka faa'iideysan doonaan orod waxayna ka ciyaari doonaan xadhigga. Waxay jecel yihiin inay dib u soo ceshadaan oo ay dabaashaan. Eeyahaani waxay sifiican ugu shaqeeyaan tijaabooyinka xirfadaha garashada iyo tartamada adeecida.
Koodhka nooca loo yaqaan 'Springer-type' waa mid fudud oo la dayactiro isla markaana si joogto ah loogu cadaydo burush adag oo adag si uu u muuqdo mid wanaagsan oo muuqaalka nooca 'Springers' ah ayaa u baahan fiiro dheeraad ah. Labaduba waxay u baahan yihiin qubaysyo iyo shaambo qalalan oo keliya markii loo baahdo, laakiin si joogto ah dhegaha uga hubso calaamadaha cudurka. Jiilaalleyda leh jaakadaha dhaadheer ayaa matoobi doona haddii aan badanaa la cadayan oo fiiro gaar ah ayaa loo baahan yahay in la siiyo dhegaha iyo cagaha. Haddii timaha aan laga xiiirin dhagaha hoostooda, waxay u horseedi kartaa caabuq dhego-xanuun oo daba-dheeraada. Timaha cagaha ayaa loo baahan yahay in la jaro si looga ilaaliyo burcooyinka iyo dawacooyinka inay ku duugaan. Koodhadhka dhaadheer ayaa soo qaadan doona burrs iyo laamo waxayna u baahan yihiin in la xoqo jimicsiga ka dib ama haddii ay si xun u socdaan. Nooca bandhigga 'Springer' ma laha jaakad u badan sida tan Isbaanish Mareykan ah , laakiin waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Noocani waa mid si caadi ah u daadiya.
Isbaanishka 'Springer Spaniel' ee Ingiriisiga waa aasaasaha dhammaan isbaanishka ugaarsiga Ingiriisiga. Intii lagu jiray Renaissance, waxaa loo tixgeliyey inuu yahay wehel ku habboon ugaarsadeyaasha reer Yurub. Caan ka noqoshada America waxay bilaabatay 1700. The Clumber , ah Sussex , ah Guga Welsh , ah Goob , ah Biyaha Irish , iyo Cocker Spaniel dhammaantood waxay ka soo baxeen Ingiriiskii Xilligii Gu'ga ee Isbaanishka. Mar haddii loo tixgeliyo isku nooc sida Cocker Spaniel , eydu waxay ku dhasheen isla qashin. Eeyaha yaryar ayaa ahaa kuwa loo yaqaan 'Cockers' waxaana loo adeegsan jiray in lagu ugaarsado qoryaha loo yaqaan 'woodcock'. Eeyaha waaweyn ee qashinka ku jira, kuwa loo yaqaan 'Springers English', ayaa loo isticmaali jiray inay ku soo baxaan oo ay ku soo baxaan ciyaarta, sidaa darteed halka eygu ka helo magaca. Labada eeyo ee baaxad leh waxay ahaayeen welina ku fiican yihiin ugaarsiga dhulka iyo biyaha waxayna ku fiican yihiin shaqada burushka, sidoo kale waxay sameeyaan ganaax wanaagsan. Waxay ahayd ilaa 1902 markii ay Kooxda Kennel ee Ingriisku u aqoonsatay Ingiriisiga Springer Spaniel inuu yahay nooc ka duwan kan loo yaqaan 'Cocker Spaniel'. English Springer Spaniel waxaa aqoonsaday AKC 1910. Iskuduwaha Maxkmada Ingiriis Xilliga Xilliga Isbaanishka ee Isbaanishka waxaa la sameeyay 1924, tijaabooyinna waa la qabtay markii ugu horreysay. Awooddooda waxaa ka mid ah ugaadhsiga, raad-raaca, soo-celinta, ilaalinta, feejignaanta, u hoggaansamida tartanka iyo qabashada tabaha.
somali bulldog boston terrier mix puppy puppy for sale
Frodo, oo ah 5-sano jir Ingiriis Springer Spaniel ah ayaa xeeya adhi, wuxuuna ku quustaa tartamada DockDogs. Wuxuu ka soo jeedaa Ingiriiskii 'Springer Rescue America' (ESRA).
Harley the English Springer Spaniel oo 12 jir ah— 'Harley waa xayawaan gurijoog ah Hooyadiis waxay lahayd khadadka horyaalnimada aabihiis aabihiisna wuxuu lahaa xoogaa show ah.
Jiilaalka Sam beerta Ingiriis Springer Spaniel sida eey markay 10 toddobaad jirsato— 'Jiilaal Sam waa 10 toddobaad. Isagu waa beer / shaqeeya Springer Spaniel labadiisa waalidna waxay yihiin eeyo qoryo shaqeeya. Wuxuu nalala noolaa muddo 2 toddobaad ah aadna uu u caqli badan yahay una deggan yahay eey da'diisa ah. Sawirkaan Sam wuxuu kujiraa kursigeenii hore ee riixida oo imanaya si uu caruurta ugaqaato iskuulka. Maaddaama uusan si buuxda u tallaalin weli looma oggola inuu dibadda u baxo laakiin waxaan u maleynayaa inay aad muhiim u tahay inuu la qabsado howlahayga maalinlaha ah iyo meelaha aan geynayo. Sidan ayuu ku helayaa bulsho dadka iyo xaaladaha uu wajihi doono markuu weynaado. Waan jeclahay websaydhkaaga waxayna aad u caawisay markii lagu bilaabay lugta midig ahaanshaha hogaamiyaha baakadka . Aad ayaan ugu faraxsanahay macluumaadka ku saabsan barida eyga inuu ixtiraamo carruurteenna. '
Mae the English Springer Spaniel oo jira 5 sano— Iyadu waa gabar faraxsan oo ciyaarta ciyaarta. Waxay jeceshahay qoyskeeda, gaar ahaan walaalkeed cusub ee aadanaha. Waxay uga heshay ugaarsiga, laakiin qoryo la’aan. Sawirkaan waxay daawaneysaa qeyb ka mid ah berriga oo soo degaya. '
Emily the English Springer Spaniel oo fadhida beerta horteeda.
Essex Marshall beerta English Springer Spaniel
Waxaan ahay taageere weyn oo bartaada ah. Waxaan kula socday khibradahaaga Bruno eey , hanbalyo isaga. Kani waa Merlina oo ah cunug 8-toddobaad jir ah. Waxaan ku korineynaa iyada oo loo eegayo waxbarista Cesar Millan, waana ku faraxsanahay inaan iraahdo waxaan goobjoog u nahay natiijooyin wanaagsan.
'Tani waa Harry the English Springer Spaniel. Waa 10 bilood jir aadna u firfircoon. Wuxuu jecel yahay orod ila, iyo socod dheer ee beerta . Wuxuu jecel yahay dabaasha iyo raacida baabuurta, sidoo kale. '
Kani waa Winston, Ingiriis Springer Spaniel eey ah oo jirta 2 bilood. Wuxuu gabi ahaanba jecel yahay inuu ku ciyaaro alaabtiisa iyo eeyaha kale! Waxay u egtahay xidhmo tamar ah oo dhogor duudduuban !! '
Winston, oo ah ubax Ingiriis ah Spaniel yar yar oo jira 2 bilood
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah Spaniel Ingiriisi Guga
Ingiriis Springer Spaniel Sawirada 1
Ingiriisi Springer Spaniel Sawirada 2
Ingiriisiga Xilliga Gu'ga Spaniel Spaniel: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
jarmalka isku-dhafka shaybaarka timaha gaaban
pictures of eey Chow Chow a
Teetup australia xoolo dhaqato ah oo koray
bichon frize iyo boqor charles isku qas